डिभि नतिजा आज आउँदै , यसरी हेर्नुस् ! - USNEPALNEWS.COM
डिभि नतिजा आज आउँदै , यसरी हेर्नुस् !
अमेरिकी डाइर्भसिटी भिसा (इडिभि) २०२० को नतिजा आज सार्वजनिक हुँदैछ ।
गत असोज १७ गतेदेखि कात्तिक २० गतेसम्म आवेदन खुलाइएको थियो । इडिभीका बिजेताहरुले सन् २०१९ को अक्टोबर १ देखि अमेरिकाको भिसा प्राप्त गर्न सुरु गर्नेछन् ।
नतिजा https://www.dvlottery.state.gov/ मा गएर हेर्न सकिन्छ ।
ट्विटर सुरक्षा नीति परिवर्तन: ट्रम्पको ट्विट निशानामा पर्ने
‘छोरालाई बलात्कार नगर भनेर सम्झाउनुपर्‍यो’ : अनुराधा कोइराला